7 febroary 2009 : Tokony hampiharina ny didim-pitsarana -
AccueilRaharaham-pirenena7 febroary 2009 : Tokony hampiharina ny didim-pitsarana
08/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
tsy mbola nikatona ny fery, izay no tsapa sy tazana tamin’ ny sora-baventy nolanjain’ ny fikambanan’ireo niaram-boina (AV7) nandritra ny hetsika fahatsiarovana sy fanateram-boninkazo ho an ‘ireo lavo tamin’ ny hetsika 7 febroary 2009 tetsy Antaninarenina omaly. Nandritra ny fandraisam-pitenenana fohy nataon’ ny filohan’ ny AV7, Boana Jean-Pierre Razafimandimby, fa tokony hampiarina amin’izay ny didim-pitsarana ho an’ireo voaheloka noho ny raharaha 7 febroary « mba manotany tena ihany izahay ankehitriny hoe maninona no tsy hampiarin’ ny fitsarana ny didy izay efa nivoaka ny taona 2010, ho an ‘izay tompon’antoka tamin’ ny raharaha famonoana sy fandripahana vahoaka. Manoloana izany dia miantso ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izahay mba hanontany ny minisitry ny fitsarana amin’ ny fizotry ny antantan-toatra amin’ ny fampiarana ny lalàna» hoy hatrany i Boana Jean-Pierre Razafimandimby.
Io antso io rahateo izay niraisan ‘ireo antoko politika tonga nanatitra voninkazo fahatsiarovana teny Ambohitsirohitra manoloana ny tsangam-baton’ ny 7 febroary 2009, ary anisan ‘ny nanamafy izany ihany koa i Razanamahasoa Christine avy amin’ ny Mapar « tany tan-dalàna i Madagasikara, mangataka izay amin’ ny hampiarana ny lalàna ho an’izay voakasiky ny raharaha. Ny fitsarana izay namoaka ny didy dia fitsarana izay efa namoaka didy tamina raharaha ady heloka bevava nifanesy hatramin’ ny nahazoana ny fahaleovan-tena. Noho izany dia tsy tokony hisy ny fanavahana » hoy ity minisitry ny fitsarana teo aloha ity.
Ankilany ho an’ ny TIM tamin’ ny alalan’ i Guy Rivo Randrianarisoa dia nisy ambadika politika ny raharaha 7 febroary, izay antony handavan’izy ireo ny didim-pitsarana efa nivoaka « tsy vao voalohany no nisy ny zava-nitranga tahaka ireny, raha tsihahivina ny 10 aogositra 1991. Noho izany, hangatahinay ny hamerenana ny fotoam-pitsarana ahitana ny tena tompon’antoka. Ary ambaranay etoana fa ny vahoaka Malagasy no lasibatry ny famonoana tamin’ ireny fotoana ireny, iarahan’ny rehetra mahalala ihany koa fa tsy tonga ho azy teny Ambohitsirohitra ireny olona ireny raha tsy nisy ny kajikajy izay notanterahin’ ny mpitarika azy ireo. Tsaroana etoana ny tso-drano izay nomen’ i Andry Rajoelina» hoy hatrany ity solombavam-bahoaka TIM ity.
Fa anisan’ny nahatsiaro ary nanatitra voninkazo tetsy amin’ ny tsangambaton’ ny 7 febroary ihany koa ny solontenan’ ny governemanta izay notarihin’ ny minisitry ny Rano sy Angovo ary narahin’ ny lehiben’ ny Faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary. Tena an-toerana ihany koa moa ireo mpanolontsaina manokan’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary tsy adino ny avy amin’ ny antoko HVM izay notarihin’ny filoha lefiny dia i Rachid Mohamed.
Tsara ny mampatsiahy fa nandritra ny fotoam-pitsarana ny raharaha 7 febroary 2009, ampolony ireo nohapangain ‘ny Fitsarana fa tafiditra tamin’iny raharaha nahafatesan’olona maro iny. Marihana fa anisan ‘ny nomelohin’ ny fitsarana higadra mandra-pahafaty sy hiasa an-terovozona ny filoha mpanorina ny orinasa tiko izay Filoham-pirenena tamin’ ny fotoana nitrangan’ ny raharaha 7 febroary 2009, miampy lamandy 600 tapitrisa ariary izay miisa 19 izy ireo no mifampizara ny fandohavana io onitra io.